Mpanamboatra vokatra |China Products mpamatsy sy orinasa
Silicone boribory fantsona drainage fantsona
Fanary silicone fingotra fitaovana fanerena ratsy drainage
Silicone Nasal Oxygen Cannula Tube
Ny orinasa dia manana atrikasa fanadiovana ambaratonga 100000, mampihatra mafy ny rafi-pitantanana kalitaon'ny fitaovana ara-pitsaboana (ISO13485), mampiasa akora avo lenta sy teknolojia silica gel ara-pitsaboana mandroso izay mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra RoHS sy FDA, mampiditra vahiny mandroso maromaro. fitaovana, ary manome azo antoka sy avo lenta silicone fingotra azo ampiasaina ho an'ny indostrian'ny fitsaboana.
Silicone rivotra circuit
Ampiasaina miaraka amin'ny milina fanenjehana sy ventilator izy io mba hananganana fantsom-pisefoana artifisialy ho an'ny fanatoranana na famatsiana oksizenina ny marary fandidiana.
Silicone vavony fantsona
Fampiharana: Ampiasaina indrindra ho an'ny decompression gastrointestinal, sakafo enteral ary fampidirana zava-mahadomelina.
Fampiharana: Izy io dia ampiasaina amin'ny fitaovana fanerena fanerena ratsy ivelany mba hivoaka ara-potoana ny exudate sy ny ra avy amin'ny ratra, hisorohana ny areti-mifindra ary hampiroborobo ny fanasitranana ny ratra, mifanandrify amin'ny baolina sy ny fanjaitra ratsy.
Ball drainage fanerena ratsy azo ampiasaina
Spec: 100ML, 200ML
Laharan'ny fisoratana anarana CE: HD 60135489 0001
Vita amin'ny silicone grade 100% ara-pitsaboana, tsy misy fahasosorana, tsy misy allergie na tsy fahazakana, tsara ho an'ny fametrahana maharitra, X-ray detective tsipika amin'ny alalan'ny catheter, Color-code ho an'ny fijerena ny habeny, fampiasana tokana ihany, CE, ISO13485 certifications